Tag: ah | Sagal Radio Services
Dalxiise u dhashay Jarmalka oo lagu dilay dalka Itoobiya
Sagal Radio Services • News Report • December 5, 2017
Dalxiise u dhashay dalka Jarmalka ayaa lagu dilay waqooyi bari dalka Itoobiya, gaar ahaan meel ku dhow Xuduuda Eritrea.
Nin Soomaali ah oo Dukaan ku Yaalla Gobolka Texes Dad ku Afduubtay
Sagal Radio Services • News Report • June 15, 2016
Nin hubeysan ayaa gudaha u galay dukaanka weyn ee Walmert oo ku yaala magaalada Amarillo ee gobolka Texes dalka Maraykanka.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo howl gal ka sameeyay Galgaduud
Sagal Radio Services • News Report • May 11, 2016
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Milateriga Soomaaliya ayaa xalay howl galo qorsheysan ka sameeyeen Gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceel Timir oo qiyaastii 15KM u jira degmada Galcad.
Ardayda Jaamacadda Muqdisho oo guulo ka soo hoyay Tartan ka dhacay dalka Qubrus (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • May 2, 2016
Jaamacadda Muqdisho oo ah Jaamacaddii ugu horeysay ee dalka laga hirgeliyay burburkii kadib bulshadana gaarsiisay adeeg waxbarasho oo tayo leh lana mid ah kan caalamka waxay mudadii ay jirtay ka mid noqotay xubin fir fircoona ka tahay ururo Jaamacadeed oo caalami ah iyo kuwo heer gobal ah oo ay la wadaagto halbeega waxbarasho ee caalamka, tayada iyo waxqabadka hufan.
Soomaali loo heysto dilka Gabar u dhalatay Sweden oo la ogaaday inuu 18-jir yahay
Sagal Radio Services • News Report • February 16, 2016
Wiil Soomaali oo loo heysto dilka Gabar u dhalatay Sweden oo lagu magacaabi jiray Alexandra Mezher oo 22 jir ah ayaa la shaaciyay inuu 18-jir yahay, kadib markii Maxkamadda qaadeysay dacwadiisa ay shaki gelisay da’da uu sheegtay oo aheyd 15-sano jir.
200 milyan oo gabdha loo guday fircooni ayaa ku nool caalamka
Sagal Radio Services • News Report • February 5, 2016
Warbixin ay maanta soo saartay Hey’ada UNICEF ayaa lagu sheegay in aduunyada ay ku noolyihiin ilaa iyo 200 milyan oo gabdho iyo haween oo loo guday habka gudniinka fircooniga.
Guddi xaqiiq raadin ah oo dowladda Federaalka u direyso degmada Beled-Xaawo
Guddi xaqiiq raadin ah ayaa maanta u ambabixi doona degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo, iyadoo guddigan ay ka kooban yihiin Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Wiil dhalinyaro Soomaali ah oo loo diiday sharciga Jarmalka oo is daldalay
Sagal Radio Services • News Report • November 13, 2015
Wararka ka imanaya dalka Jarmalka ayaa sheegaya in wiil dhalinyaro ah oo Soomali ah uu isku daldalay magaalo ku taal dalka Jarmalka kadib markii loo diiday sharciga degenaanshaha wadankaas.
Dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo lagu soo oogay dacwad la xiriirta shirqool dil ah
Dhalinyaro Soomaali Mareykanka ah oo horay isku dayay inay ku biiraan Kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira inay maleegayeen shirqoolo dil ah.
Maxkamad ku taal Uganda oo 18-sano xabsi ah ku riday Sarkaal ka tirsanaa AMISOM
Maxkamad ku taal dalka Uganda ayaa 18-sano xabsi ah ku riday Sarkaal ka tirsanaa howl galka AMISOM ee Soomaaliya, kaasoo lagu eedeeyay inuu shidaal xaday, isla markaana iibsaday.
Wasiiraddii hore ee Batroolka Nigeria oo lagu xiray magaalada London
Wasiiraddii hore ee Batroolka Nigeria Alison-Madueke ayaa lagu xiray magaalada London ee dalka Ingiriiska, iyadoo xarigan loo sababeeyay arrimo musuq maasuq ah oo hey’ad caalami ah oo la dagaalanta musuq maasuqa ku soo eedeysay.
Sagal Radio Services • News Report • August 25, 2015
Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha oo loo gudbiyay Guddoonka Baarlamaanka (Akhriso)
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta u gudbiyay Guddoonka Baarlamaanka mooshin kalsooni kala noqosho ah oo ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
AMISOM oo Raashin ah u Qaybisay Qoysas kala duwan oo ku nool Gobolka Banaadir (SAWIRRO)
Sagal Radio Services • News Report • July 7, 2015
AMISOM oo Kaashanaysa Hay'adaha Samafal ayaa gargaar cunto oo kala duwan ka Qaybisay Muqdisho, iyadoo sheegay inay ugu talo-galeen in shacabka Soomaaliyeed ay isticmaalaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Sagal Radio Services • News Report • June 30, 2015
Askari ka tirsan AMISOM ayaa isku dhiibay Xarakada Al-Shabaab, iyadoo askarigan maalinimadii shalay lagu soo bandhigay degmada Diinsoor ee Gobolka Baay.
Muwaadin British ah oo ka mid ahaa 11 dagaalyahan ka tirsan Shabaab oo lagu dilay Lamu
Sagal Radio Services • News Report • June 15, 2015
Muwaadin British ah ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa 11 dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay dagaal subaxdii Axadii ka dhacay degmada Lamu ee Gobolka Xeebta Kenya.
FBI-da oo doon dooneysa ruux Soomaali Mareykan ah lagu daray Liiska Argagixisada
Hey’adda dambi baarista Mareykanka ee loo yaqaano FBI ayaa soo liiska dadka ay u doon dooneyso Argagixisada ku dartay ruux Soomaali Mareykanka ah, kaasoo ay hey’addu madaxiisa dul saartay 50-kun oo dollar cidii soo sheegta macluumaad sahleysa in la soo qabto.
Gabar 14 Jir Reer Falastiin ah oo Abaalmarin Caalami ah ku guuleysatay”Sawiro”
Gabar 14 sano jir reer Falastiin ah ayaa ku guuleysatay Tartan caalami ah oo ay kasoo qeybgaleen arday kasocotay wadamo dhowr ah, kaa oo lagu tartamaye xalinta layliyo Xisaab ah oo gaaraye 240 oo ladoonaye in lagu xaliyo mudo 6 daqiiqo ah.
Daawo Sawirada" R/Wasaaraha oo kulan sagootin ah u sameeyay Guddiga maamul-u sameynta maamulka Koonfur Galbeed
Sagal Radio Services • News Report • August 4, 2014
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo qaar ka mid ah xubnaha Golaha Wasiirrada ayaa kulan sagootin ah la yeeshay Guddiga Maamul-u-Samaynta Koonfur Galbeed.
WAFDI KA SOCDA BAARLAMAANKA TURKIGA OO MUQDISHO SOO GAARAY
Sagal Radio Services • News Report • May 19, 2014
Waxaa maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi Xildhibaano ah oo ka socda Dowladda Turkiga, kuwaasi oo maanta barqadii soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Ciiddanka Gaarka ee (EASF) oo ku soo biiri doona Hawlgalka la gula dagaalamayo Al-shabaab.
Sagal Radio Services • News Report • April 24, 2014
Wasiiradda Gaashaandhigga ee dalalka Rwanda, Uganda, Kenya, Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Seychelles, Somalia iyo Sudan ayaa shalay waxa uu kulan ugu soo idlaaday Caasimadda dalka Ruwanda ee Kigali.
Daawo Sawirada Ex- Dable Maslax Ciise Iimaan oo Saakay Magaalada Muqdisho lagu toogtay
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Dowlada Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulisay Askari katirsan Ciidanka Dowlada Soomaaliya oo horey Magaalada Muqdisho ugu dilay Arday wax baranayay.
Muqdisho oo looga dhawaaqay urur ay ku midaysan yihiin haweenka suxufiyiinta ah
Sagal Radio Services • News Report • December 30, 2013
Urur cusub oo ay ku midaysan yihiin haweenka suxufiyiinta ah ayaa Axaddii shalay looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyey Khasaaraha ay Roobabkii Duufaanta watey ka geysteen gobollada Bariga xiga ee Puntland (SAWIRRO)
Sagal Radio Services • Audio/News Report • November 13, 2013
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada ayaa booqday qaar kamid ah deegaanada ay saameeyeen roobabkii duufaanta watey ee dhowrkii beri ee ugu dambeeyey ka da'ayey gobollada Bad-weynta Hindiya xiga ee ku yaal dhinaca bari ee Puntland.
Halkaan ka dhageyso dhibka meesha ka jira
Daawo sawirro Kenya iyo Soomaaliya oo hishiis ka gaaray soo cilinta qaxootiga ku nool Dalka kenya
Shir 3 geesood ah oo looga hadlayay sidii dib dalka Soomaaliya loogu celin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa maanta lagu qatay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Deeq Lacageed Oo La Guddoonsiiyay Waalidiintii Iyo Caruurtii Uu Ka Tegay Timacadde
Deeq Lacageed oo ay soo direen wariyaal ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa maanta la gaarsiiyay caruurtii iyo waalidiintii uu ka tegay Allaha u naxariistee Maxamed Maxamuud “Timacadde’’ oo dhawaan lagu dilay Muqdisho.
Reer Muqdisho oo soo dhaweeyay 22 sano ka dib in maamulka uu hir giliyo adeega samaafarada.
Waxaa magaalada Muqdisho laga hir giliyay muda dheer ka dib leerarka samaafarada ee lagu kala hago gawaariga qeebahooda kala duwan ee isaga kala goosha Muqdisho qeebaheeda kala duwan
R/wasaare Saacid Oo Kulan Looga Hadlayay Ammaanka La Qaatay laamaha kala duwan ee Dowlada ee ku shaqada leh amaanka.
Kulanka ayaa waxa uu haa mid aad u balaaran waxaana diirada lagu saaray sidii loo xoojin lahaa amaanka caasimada soomaaliya waxaana inta badan joogay hay,adaha ku shaqada leh sida Booliska iyo nabad sugida iyo maamulka Gobalka Banaadie iyo saraakiil Ciidan oo dhamaan kulanka looga yeeray waxaana kulanka shir gudoominaayay R/wasaare Saacid.
Dhalinyaro Soomaali Ah Oo Lagu Xiray Dalka Namibiyo"Aqri Magacyada Dhalinyarada"
Soomaalida lagu dhibaateeyo dalalka Afrika oo sii badanaya iyo tiro dhalinyaro ah oo buux dhaafiyay xabsiyada wadamada marinka u ah Konfur Afrika.